Accueil > Gazetin'ny nosy > Fifidianana: Milatsaka filoha sao mba ho tendrena minisitra
Fifidianana: Milatsaka filoha sao mba ho tendrena minisitra
Tena efa mirefarefa amin’ny tany tanteraka ny fanaovana pôlitika eto Madagasikara ankehitriny. Mandeha dia mandeha ny ady hevitra etsy sy eroa fa hilatsaka filoham-pirenena hono ranona sy ranona satria manana vola kely azo ampiadiana. Tena betsaka amin’izao fotoana izao no olona hita fa manam-bola sy manan-karena ary fantatr’olona dia hilatsaka ho filoham-pirenena. Nahatratra 42 no afaka nilatsaka ho filoham-pirenena tamin’ny taona 2013. Ny olona nandefa ny filatsahana tany amin’ny HCC na ny Fahefana avo momba ny lalàmpanorenana dia teo amin’ny 50 mahery teo ho eo. Rehefa nodinihina ny mahakasika azy ireny dia olona te ho minisitra avokoa ny ankamaroany fa tsy mieritreritra velively ny ho filoham-pirenena. Ohatra amin’izany ingahy Kolo Roger izay Praiminisitra ary lasa senateran’ingahy Hery Rajaonarimampianina ankehitriny. Toa izany koa ingahy Jules Etienne izay minisitra ny Indostria teo aloha, ingahy Dadafara na Randriamampionona Joseph Martin, Brigitte Rasamoelina avy amin’ny antoko Ampela manao pôlitika, ingahy Roland Ratsiraka izay minisitra amin’izao fotoana izao. Maro no mbola te ho minisitra fa tsy nantsoina ka hatramin’izao fotoana izao dia mbola mihaodihaody eny ambavahadin’ny lapa eny Iavoloha sy Mahazoarivo ary Ambohitsorohitra.
Raha tena manaraka ny soatoavina pôlitika ny mpanao pôlitika Malagasy dia rehefa tsy lany amin’ny antoko misy azy dia milatsaka ho mpanohitra na manomana ny fifidianana amin’ny fotoam-pitondrana manaraka indray fa tsy manao fivarotan-tena pôlitika toa ny zava-misy eto Madagasikara amin’izao fotoana izao, ka hanao minisitra indray. Tena zava-doza! Ireo no atao jiolahy pôlitika ka mahatonga fahantrana misy eto amin’ny firenena izao. Tena mazava fa fitiavan-tena tanteraka no ataon’ireo olona ireo fa tsy mijery ny tombotsoam-pirenena sy ny vahoaka intsony.
Amin’izao fotoana izao dia mbola vinavinaina ho 40 mahery hatrany ny mpilatsaka eto Madagasikara amin’ity fifidianana ho avy ity. Mahita ny tsy fahombiazan’ny fitondrana nifanesy teo nanomboka tamin’ny andron’ingahy Ravalomanana Marc ka nandalo tamin’ingahy Andry Nirina Rajoelina, ary niafara amin’i Hery Rajaonarimampianina izao. Tsy nahomby ny fitondran’izy telolahy ireto nefa mbola samy misisika hitondra indray ny fe-potoam-pitondrana (mandat) faharoa amin’ny repoblika fahefatra. Raha tsiahivina ny lahatsoratra efa navoakanay teto amin’ny “La gazette de la grande Ile” tamin’ny faha 22 febroary 2018 mahakasika azy telolahy ireo dia samy nangalatra ny harem-pirenena, sy nanodinkodina volam-bahoaka, ary nanondrana antsokosoko ny harem-pirenena toa ny andramena na ny “bois des roses” sy ny vatosoa ary ny volamena teto Madagasikara avokoa izy ireo. Ikotofetsy sy Imahaka ary Itrimobe no isokajian’ny olona azy ireo amin’izao fotoana izao. Ny mpitondra fanjakana teto nanomboka tamin’ny taona 2001 ka hatramin’ny 2018 izao dia nampahantra tanteraka ny vahoaka Malagasy, ary nampitondra faisana azy.
Noho izany dia aoka mba olona manana traikefa amin’ny fitondrana firenena, tia tanindrazana no sady madio sy tsy manana “casserole”, tsy nangalatra sy nanodinkodina volam-bahoaka, manaja ny maha Malagasy ary mahavoafehy tsara ny fifandraisana iraisam-pirenena ka tsy hanaonao foana toa ny nataon’izy telo lahy ireo hatramin’izao. Matahotra an’Andriamanitra sy ny Zanahary koa. Tena manana izany iska Malagasy saingy revo amin’ny vola kely sy ny akanjo, ary elo sy ny fanomezana isan-karazany amin’ny fifidianana izay hamitahana vahoaka ny olona noho ny fahantrana vokatry ny fitondran’izy telo lahy ireo.
Mirehareha ho manam-bola avokoa izy ireo nefa ny vola tsy madio sy tsy fanta-pihaviana no entin’izy ireo hividianana ny vahoaka sy hiadiana fanjakana. Tokony ho tonga saina amin’izay ny Malagasy fa tsy izy intsony izao.